‘सबैलाई साथमा लिएर गाउँको विकासमा लाग्नेछु’ | नयाँ शक्ति नेपाल
‘सबैलाई साथमा लिएर गाउँको विकासमा लाग्नेछु’
१६ असार, २०७४
काठमाडौं – प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुने एक मात्र व्यक्ति बन्नुभयो रसुवाका बुचुङ तामाङ । उहाँ रसुवास्थित पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नुभएको हो ।
एक साँझ काठमाडौंस्थित नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई निवासमा आफ्ना गाउँका जननिर्वाचित अरु प्रतिनिधिहरुसहित भेटिनुभएका उहाँसँग गाउँको विकास निर्माण तथा नमूना गाउँ बनाउने योजना बारे छोटो कुराकानी भयो ।
कुराकानीकै क्रममा उहाँले आफूले चुनाव जितिसकेपछि निकै ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको महशुस भएको बताउनुभयो । ‘चुनाव जितिसकेपछि धेरै ठूलो जिम्मेवारी बोध भएको जस्तो लागेको छ । जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने कुरामा चिन्तित छु र सबै पक्षलाई समेटेर गाउँको विकासमा अग्रसर हुने प्रण गरेको छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
सबै उम्मेदवारहरुले चुनावमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै चुनावी प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तपाईंले आफ्नो गाउँपालिकामा के कस्ता प्रतिद्धता जनाउनुभएको छ ? भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो – ‘मैले गाउँमा कुनै कुराको पनि आश्वासन दिएको छैन । किनकि आश्वासन दिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा त्यो बाचा पूरा गर्नु हो । म उहाँहरुको प्रत्येक गाउँ बस्ती र वडामा आएर त्यहाँको समस्या र आवश्यकता टिपोट गरेर लैजान्छु र समाधानको प्रयास गर्छु भनेको थिएँ, मैले गर्ने पनि त्यही हो ।’
रसुवाको दुर्गम क्षेत्र मध्येको एक पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको प्रमुख आवश्यकता भनेको सडक नै हो । सडकले नै सबै संभावनाको ढोका खोल्ने भएको हुनाले सबै गाउँमा सडक पुर्याउन सके त्यहाँको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘एउटा सामान्य विरामीलाई पनि उपचारका लागि डोकोमा बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था छ र बोक्ने मान्छे भएन भने ज्यानै जाने अवस्था छ । यसर्थ, यहाँको पहिलो आवश्यकता सडक हो । सबैभन्दा पहिले म गाउँमा सडक सञ्जाल पुर्याउने मेरो योजना छ ।’
डाँडाकाँडा र खोलानालाले भरिएको पार्वतीकुण्ड प्राकृतिक र जल सम्पदामा अब्बल क्षेत्र हो । जलविद्युतले नै यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्ने देखिन्छ । तर, त्यसको कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्ने उहाँको माग छ । ‘यहाँको मुख्य आर्थिक स्रोतको संभावना जलविद्युत हो । यहाँ ६ देखि २१६ मेगावाट क्षमता भएका ९ वटा निर्माणाधिन आयोजनाहरु छन् । हामीले बिजुलीबाट नै मनग्य आम्दानी गर्न सक्छौं तर, त्यसका लागि जलविद्युतको कर स्थानीय तहले उठाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भयो भने हामी धनी बन्न सक्छौं ।’
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका तामाङ भन्नुहुन्छ – ‘सडक भएपछि निर्माण समाग्रीहरुको ढुवानीलाई सहज हुनेछ । त्यसपछि मेरो जोड खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने अनि स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास हुनेछ ।’
तपाईंले गाउँमा के के नमूना काम गर्दै हुनुहुन्छ ? उत्तरमा हौसिंदै उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘सबै बस्तीमा सडक पुर्याउने मुख्य योजना हो । नांगा डाँडाहरुमा वृक्षरोपन गर्ने । साँघुरा बाटाहरुलाई सुधार गरी राम्रो बनाउने । पर्यटकीय क्ष्ँोत्रको विकास गर्ने । गाउँलाई तामाङ संस्कृतिको अध्ययन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने । पर्यटकीय पदयात्रको लागि राम्रो बाटो निर्माण गर्नेलगायत यो गाउँलाई साँच्चिकै नमूना बनाउने मेरो मुख्य योजना हो ।’
आफू चुनावी अभियानमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट नै अघि बढेको बताउँदै सबै दलहरुसँगको सहकार्यमा संयुक्त चुनावी अभियानमा हिंडेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘सबैसँग संयुक्त रुपमै चुनावी अभियानमा हिंडेको थिएँ । सबैलाई सँगै लिएर जाने हो । मनमुटावतिर जाने होइन । गाउँको विकास र उत्थानका लागि सबैको सहकार्य जरुरी हुन्छ । म सधैं सबैलाई साथमा लिएर गाउँको विकासमा लाग्नेछु ।’